Application Process – Nay Pyi Taw International Science academy
We are excited that you are considering NISA for your child. We will support you throughout the admissions process and look forward to welcoming you to the NISA.
Students seeking registration at NISA from Kindergarten to Secondary are placed according to their age on or before 30 September.
Please, download the application form, complete your application form and supporting documents together withaone-time, non-refundable application fee. Once application form is completed, please submit it to the following email address: admissions@nisa.edu.mm
Based on the applicant’s previous scholastic records and performance on the NISA admissions assessment, the Admissions Committee will makeadecision on whether or not to offer the applicantaplace. You will be notified by email or message of the outcome.
သင်၏ကလေးများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ Naypyitaw International Science Academy ကိုစိတ်ဝင်စားသည့်အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားမိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျောင်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာတင်မှု တစ်လျှောက်လုံးတွင် သင့်အားပံ့ပိုးပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး Naypyitaw International Science Academy မှသင့်အား ကြိုဆိုလျက်ရှိပါသည်။
Naypyitaw International Science Academy တွင် တက်ရောက်လိုသော ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည် သူငယ်တန်းမှအလယ်တန်း သို့ တက်ရောက်ရာတွင် စက်တင်ဘာ (၃၀)ရက်မတိုင်ခင်ရှိသော ၎င်းတို့၏အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်၍ အတန်းများ ခွဲခြားပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါလျှောက်လွှာပုံစံကို download ပြုလုပ်ပါ။ ၎င်းလျှောက်လွှာပုံစံကို အထောက်အကူပြုစာရွက်များနှင့်တကွ၊ ပြန်အမ်းခွင့်မရှိသည့် လျှောက်လွှာ နှင့်အတူ ဖြည့်စွက်ပါ။ လျှောက်လွှာတစ်ခု ဖြည့်ပြီးပါက ကျေးဇူးပြု၍အောက်ပါ email သို့ပေးပို့ပေးပါ။ admissions@nisa.edu.mm
Naypyitaw International Science Academy ၏ကျောင်းဝင်ခွင့်အကဲဖြတ်ကော်မတီမှ ယခင်ပြီးခဲ့သည့် ကျောင်းမှတ်တမ်းနှင့် Naypyitaw International Science Academy မှ စစ်ဆေးသောဝင်ခွင့်စာမေးပွဲပေါ်မူတည်၍ လျှောက်ထားသူမှ တက်ရောက်နိုင်ခြင်း ရှိ ၊မရှိကို ဆုံးဖြတ်ချက် ချပါလိမ့်မည်။ ကလေး၏ရလဒ်များကို email (သို့မဟုတ်) message မှတစ်ဆင့် ဖြေကြား ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
သငျ၏ကလေးမြားအတှကျ ကြှနျုပျတို့၏ Naypyitaw International Science Academy ကိုစိတျဝငျစားသညျ့အတှကျ စိတျလှုပျရှားမိပါသညျ။ ကြှနျုပျတို့သညျ ကြောငျးဝငျခှငျ့လြှောကျလှာတငျမှု တဈလြှောကျလုံးတှငျ သငျ့အားပံ့ပိုးပေးသှားမညျဖွဈပွီး Naypyitaw International Science Academy မှသငျ့အား ကွိုဆိုလကျြရှိပါသညျ။
Naypyitaw International Science Academy တှငျ တကျရောကျလိုသော ကြောငျးသားကြောငျးသူမြားသညျ သူငယျတနျးမှအလယျတနျး သို့ တကျရောကျရာတှငျ စကျတငျဘာ (၃၀)ရကျမတိုငျခငျရှိသော ၎င်းငျးတို့၏အသကျအရှယျပျေါမူတညျ၍ အတနျးမြား ခှဲခွားပေးသှားမညျဖွဈပါသညျ။
ကြေးဇူးပွု၍ အောကျပါလြှောကျလှာပုံစံကို download ပွုလုပျပါ။ ၎င်းငျးလြှောကျလှာပုံစံကို အထောကျအကူပွုစာရှကျမြားနှငျ့တကှ၊ ပွနျအမျးခှငျ့မရှိသညျ့ လြှောကျလှာ နှငျ့အတူ ဖွညျ့စှကျပါ။ လြှောကျလှာတဈခု ဖွညျ့ပွီးပါက ကြေးဇူးပွု၍အောကျပါ email သို့ပေးပို့ပေးပါ။ admissions@nisa.edu.mm
Naypyitaw International Science Academy ၏ကြောငျးဝငျခှငျ့အကဲဖွတျကျောမတီမှ ယခငျပွီးခဲ့သညျ့ ကြောငျးမှတျတမျးနှငျ့ Naypyitaw International Science Academy မှ စဈဆေးသောဝငျခှငျ့စာမေးပှဲပျေါမူတညျ၍ လြှောကျထားသူမှ တကျရောကျနိုငျခွငျး ရှိ ၊မရှိကို ဆုံးဖွတျခကျြ ခပြါလိမျ့မညျ။ ကလေး၏ရလဒျမြားကို email (သို့မဟုတျ) message မှတဈဆငျ့ ဖွကွေား ပေးသှားမညျဖွဈပါသညျ။